ထောက်ခံစာများ | ကျွန်ုပ်၏ကားတင်သွင်းမှု
ကမ္ဘာတစ်လွှားယာဉ်တင်သွင်းသူများ သွင်းကုန်ကျွမ်းကျင်သူ အပြည့်အဝ IVA စမ်းသပ်ခြင်း သင်၏ကားသည်ယူကေတွင်အပြည့်အ ၀ လိုက်ဖက်လိမ့်မည် အတွေ့အကြုံ၏ 30 နှစ်များ အသိပညာ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ထိရောက်သော။ 4000+ ကားများတင်သွင်း Supercar မှ Supermini အထိ - ငါတို့ကကျွမ်းကျင်သူများပါ။
ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ LHD ကားတစ်စီးကိုတင်သွင်းခြင်းနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုသင်ကိုယ်တိုင်ကိုင်တွယ်ခြင်းသည်အနီရောင်တိပ်ခြင်း၏ပမာဏသည်အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုအဖြစ်သို့အလွယ်တကူရောက်ရှိသွားနိုင်သည်ကိုမသိသည်အထိမိမိကိုယ်တိုင်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များနှင့်ဆက်ဆံခြင်းသည်လွယ်ကူသောအသံဖြစ်လိမ့်မည်။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်အမြန်ရှာဖွေခြင်းသည်ဤအလုပ်မျိုးကိုအထူးပြုသည့်ဗြိတိသျှကုမ္ပဏီအမြောက်အများကိုပေါ်ပေါက်စေခဲ့သည်။ ငါဆက်သွယ်ခဲ့သည့်စုံတွဲသည်ဗြိတိန်စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီရန်လိုအပ်သောပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ရန်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုခန့်မှန်းနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်လက်ခံရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါ။ ကံကောင်းထောက်မစွာကျွန်ုပ်၏ကားတင်သွင်းမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးသူတို့နှင့်ဆက်သွယ်သည့် အချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်သည်မှန်ကန်သောလူများကိုတွေ့ခဲ့ရကြောင်းသိရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ပထမဆုံးဖုန်းခေါ်ချိန်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းကုန်ကျစရိတ်အတိအကျနှင့် ပါတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်သည်အသေးစိတ်ခန့်မှန်းမှုရရှိခဲ့သဖြင့်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ကားကို Derby အနီးရှိ Castle Donington ရှိသူတို့၏အခြေစိုက်စခန်းသို့ပို့ဆောင်သောအခါကျွန်ုပ်သည်ကျွနုပ်၏တိုယိုတာ RAV4 မျိုးစပ်အတွက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Ferraris သုံးခုနှင့် Rolls Royce တ ဦး တည်းရှိခြင်းကြောင့်မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်ကိုသဘောပေါက်ခဲ့သည် ငါပြောခဲ့သည့်သုံးပတ်အတွင်းအလုပ်နှင့်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အားလုံးကိုအချိန်မီပြီးစီးခဲ့ပြီးကုန်ကျစရိတ်များသည်မူလခန့်မှန်းချက်အတိုင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်ထက်အများကြီးပိုများတာကကျွန်တော့်ကိုအထင်ကြီးစေခဲ့တာကတော့ ၀ န်ထမ်းတွေရဲ့အသုံးဝင်မှုနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပဲ။
ကျွန်တော်ဟာ Andorra ကနေမော်တော်ယာဉ်အမြောက်အမြားကိုယူကေသို့တင်သွင်းခဲ့တာပါ။
အင်တာနက်ကိုရှာဖွေခြင်းသည်ပို့ကုန်အပြောင်းအလဲသည်တင်သွင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ရှုထောင့်အားလုံးနှင့်ကိုက်ညီစေရန် - VAT၊ UK သို့ပြုပြင်ခြင်း - သည်သွင်းကုန်ကိုယ်စားလှယ်များဟုခေါ်သည့်အတော်များများရှိသည်။ Andorra မှဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ခြင်း။ ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးခေါ်ဆိုမှုနှစ်ခုသည်မျှော်လင့်ချက်ရှိသော်လည်းနောက်ထပ်ရက်ပေါင်းများစွာဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့်အဆုံးမဲ့လိုက်လံဖမ်းဆီးမှုများအပြီးတွင်လုံးလုံးစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကံကောင်းတာကကျွန်တော့်ရဲ့တတိယကြိုးပမ်းမှုကကျွန်တော့်ကားတင်သွင်းမှုကို Will Smith နဲ့အဆက်အသွယ်ရစေတယ်။
ထို့နောက်အရာအားလုံးလွယ်ကူပြီးရိုးရိုးရွက်လွှင့်ခဲ့သည်။ သူတို့ဟာအလွန်ရှုပ်ထွေးတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုစီရဲ့ရှုထောင့်တိုင်းကိုဂရုစိုက်ခဲ့တယ် - ငါ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအရ၊ အန်ဒိုရာ / စပိန်နယ်စပ်ရှိစာရွက်စာတမ်းထဲမှာမရိုးသားသောအကောက်ခွန်အရာရှိတစ် ဦး သို့မဟုတ်အသေးစားချို့ယွင်းမှုတစ်ခုကပရမ်းပတာဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ကားတင်သွင်းမှု၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်ထိုကဲ့သို့သောပရမ်းပတာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းသေချာစေခဲ့သည်။
မော်တော်ယာဉ်တစ်ခုစီတွင်အသေးစားပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ မော်တော်ယာဉ်တစ်စင်းသည်ရုတ်တရက်ပေါ်လာသောအင်ဂျင်ကိုရှုပ်ထွေးစေသည်။ သူတို့ကဂရုစိုက်ပြီးထိုပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းခဲ့သည်။
ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်ထင်ထားတာထက်ပိုမြန်တယ်၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်၊ စီးပွားရေးအရငါထင်ထားတာထက်ပိုများတယ်။ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုလှပတဲ့ ၂၀၀၆ Honda Goldwing ရောင်းဖို့တောင်ကူညီပေးနေတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ကားများမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကူညီပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် campervan၊ အလွယ်ကူဆုံးတော့မဟုတ်ပါ။
ငါကားကိုစိတ်ပူနေတယ်၊ ​​မင်းသိတယ်ထင်တယ် !!
ဒါဟာ IVA စမ်းသပ်မှုမှတဆင့်ခဲ့ကြောင်းယနေ့ပြောခံရဖို့ပဲအကောင်းဆုံးသတင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ သင်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးပြီ။ သင့်အားလုံးကိုစကားပြောရန်နှင့်မြင်တွေ့ရန်မျှော်လင့်သည်
ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ MyCarImport ရှိသင့်အဖွဲ့အားကျွန်ုပ်တို့အတွက်သင်လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သောကောင်းမွန်သောအလုပ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုလုံးသည်ဆစ်ဒနီမှ Castle Donnington အထိလုံးဝပြbeenနာဖြစ်ခဲ့သည်။ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုမည်သူ့ကိုမျှမပြောလိုပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ခရစ် & ဂျဲနီ Horsley
Jaguar အီးအမျိုးအစား 3.8
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းစသည့်အကူအညီများနှင့်အကူအညီများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အရာအားလုံးပြproblemsနာမရှိဘဲချောချောမွေ့မွေ့သွားပြီးအရမ်းမြန်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်အတွက်သင်လုပ်ခဲ့သမျှအတွက်သင်နှင့်သင်၏အဖွဲ့အားလုံးအားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊ မင်းနဲ့ပိုပြီးစီးပွားရေးလုပ်မှာပါ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
စီးရီး 1 Land Rover
ပန်းကန်များရောက်လာပြီးသင်၏အကူအညီအားလုံးအတွက်များစွာကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ သင်၏ကုမ္ပဏီနှင့်ဆက်ဆံရတာပျော်စရာကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်စကားလုံးပြန့်သွားအောင်ပြproblemနာမရှိပါ။
911 GT3 သည် RS
ကျွန်ုပ်၏ 2016 Porsche GT3RS ကိုတင်ပို့ခြင်းမှသည်ကားနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်၊ ကားကိုဗြိတိန်နိုင်ငံသို့မြန်နှုန်းနှင့်ထိရောက်စွာနှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်တင်သွင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကိုကိုင်တွယ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုအမြဲတမ်းအသိပေးပြီးအဆင့်တိုင်းကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပေးတယ်။ ကျနော့်အမြင်အရကားတင်သွင်းမှုကိုစီစဉ်ရန်တစ်ခုတည်းသောကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ၀ မ်းသာအားရအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ဝီလ်နှင့်အဖွဲ့အားအလွန်အမင်းကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်မဝေးတော့သည့်အနာဂတ်တွင်မင်းနှင့်တဖန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်လိမ့်မည်။
ဗြိတိန်သို့ Porsche 718 Cayman ယူအေအီး
ကျွန်ုပ်၏ 718 Cayman ကိုကူညီရန်သင့်အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်သူတို့၏ကားများကိုယူကေသို့တင်သွင်းရန်စဉ်းစားနေသောသူငယ်ချင်းများကိုသင့်အားအကြံပေးပါမည်။
ငါ့ကားကျော်ကနေလာသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ၾသစေတးလ် gents ။
၂၀၁၃ Audi A2013 - အိုင်ယာလန်သမ္မတနိုင်ငံ
Lexus IS F - ဆော်ဒီအာရေဗျ
ရုံကားကိုလက်ခံရရှိ, အရာအားလုံးကောင်းသောကြည့်ရှုသည်။ မင်းရဲ့ဘဝကိုပိုပြီးလွယ်ကူအောင်လုပ်ပြီးမင်းရဲ့ကုမ္ပဏီကိုအခြားသူတွေကိုအကြံပေးလိမ့်မယ်။
Audi A3 - အိုင်ယာလန်
သငျသညျစာသားအရာအားလုံးဤမျှလောက်ကိုင်တွယ်။ DVLA လိုအပ်ချက်များကိုတွေ့မြင်ပြီးနောက်၎င်းကိုသင့်ထံလွှဲပြောင်းပေးရန်နှင့်၎င်းကိုထိထိရောက်ရောက်ကိုင်တွယ်ရန်အလွန်သက်သာသည်။
Honda Jazz - နယူးဇီလန်
ဆိပ်ကမ်းမှယူပြီးယူကေအစိုးရ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်ကျွန်ုပ်၏ကားတင်သွင်းမှုကိုငှားရမ်းရန် - သူတို့၏ကားကိုဗြိတိန်သို့မပို့မီအမှန်တကယ်စဉ်းစားရန်မည်သူမဆိုအားကျွန်ုပ်တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ သူတို့သည်အလွန်ကောင်းသည်။
Nissan Navara - တောင်အာဖရိက
လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံးကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သောဂရုစိုက်မှုနှင့်ဂရုစိုက်မှုအတွက်သင်၏အဖေနှင့် Jade အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
သင်၏တုံ့ပြန်မှုမှသင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်၏စုံစမ်းမေးမြန်းမှုမှယာဉ်ပို့ဆောင်ခြင်းသို့ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ် ပို၍ ပျော်ရွှင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ၊ နောက်တဖန်သင့်ကိုပျော်ရွှင်စွာအသုံးပြုနိုင်သကဲ့သို့မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကိုပါရည်ညွှန်းပြောဆိုလိမ့်မည်။
၂၀၁၅ Mitsubishi Pajero - ဒူဘိုင်းကိုယူကေ
၂၀၁၅ Kia Picanto - အိုင်ယာလန်သို့ဗြိတိန်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်
ကျွန်ုပ်၏အမြန်နှုန်းပြကိရိယာကိုခွဲထုတ်။ ကျွန်ုပ်၏ကားကိုယူဆောင်လာသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုသွား။ အပိုကြိုးစားအားထုတ်မှုအားလုံးတန်ဖိုးထားတယ်။ အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Suzuki Grand Vitara - ယူကေသို့ NL
ကျွန်ုပ်၏ကားတင်သွင်းမှုကိုဂရုစိုက်ပေးခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါကဒါဟာအထူးသဖြင့်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်ကိုသိပေမယ့်သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်ကျေးဇူးတင်စကားမှန်ကန်တဲ့အစိတ်အပိုင်းများကိုရယူခြင်းနှင့်ပြissuesနာများကိုအားလုံးချက်ချင်းနှင့်ကျေနပ်ဖွယ်ဖြေရှင်းနိုင်နိုင်ခဲ့တယ်။ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုရန်တွန့်ဆုတ်မည်မဟုတ်ပါ။
ငါ့အတွက်အရာအားလုံးကိုခွဲထုတ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါအရာအားလုံးကိုကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ခွဲထုတ်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ခက်ခဲမယ်ဆိုတာစိတ်ကူးမရခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော့်အာမခံအားလုံးအကုန်လုံးပြီးအားလုံးကောင်းတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်၏ကားကိုစီထားခြင်း၊ ပြားများတပ်ဆင်ခြင်း၊ အာမခံထားရှိခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူလမ်းပေါ်ပြန်ရောက်လာသည့်အတွက်အလွန်ကျေနပ်မိသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Ford Tourneo - စပိန်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂျက်၊ ကျွန်ုပ်သည်သင်၏အကူအညီနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးအတွက်အလွန်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။
ဆစ်ဒနီ - အီးအမျိုးအစား
ကောင်းပြီ၊ E type သည်အိမ်ဖြစ်သည်။ သူမ၏ပူဖောင်းတွင်နေထိုင်သည်မှာမိုင်ပေါင်းရာနှင့်ချီ။ ကောင်းသောဂေါက်ဝုဒ်ပွဲတော်သို့တက်ခဲ့ပြီး VIP ကားရပ်နားရန်နေရာများစွာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငြိမ်သက်နေသောဂျက်ကိုကျော်ကျော်လာသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Los Angeles မြို့ - ဟွန်ဒါ CBR1000
ထိုအမှုအလုံးစုံတို့ကိုများအတွက် Jade နှင့်ဂျက်နှစ် ဦး စလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် သငျသညျလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံးအကြီးအဖြစ်ရပြီအလွန်လွယ်ကူသောနှင့်ကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်သောစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စဉ်ကိုအဖြစ်စတင်ခဲ့သည်အဘယ်အရာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်နေကြောင်းကျွန်ုပ်သိသောမည်သူမဆိုအားထပ်မံအကြံပေးလိုပါသည်။
Justin VAN EEDEN
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောဖို့မြန်မြန်ရေးပါ ငါကတစ်ခုခုယူလာဖို့အစပိုင်းမှာစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့သည်နှင့်ငါပြောသောအခြားတင်ပို့သူများကိုနက်နဲသောအရာဖြစ်ပေသည်။ ကျွန်ုပ်၏ကန ဦး ဆက်သွယ်မှုမှသည်အိမ်သို့ပို့ခြင်းအထိသင်သည်လွယ်ကူပြီးလုပ်အားခကောင်းကောင်းဖြင့်အလုပ်တစ်ခုလုံးလုပ်ခဲ့သည်။ ငါဗြိတိန်မှာကားများအိမ်ပြန်ဖို့ပို။ အခက်အခဲရှိသည်!
ကျွန်ုပ်၏ကားကိုယူကေသို့တင်ပို့ရာတွင်သင်လုပ်ခဲ့သည့်ကောင်းမွန်သောအလုပ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းမရှိရင်ငါလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး အကြှနျုပျ၏ကြေးဇူးတငျအဘယ်သူမျှမဘောငျသိတယ်။ ငါနှင့်သင်၏ကြင်နာသောစိတ်ရှည်သည်းခံခြင်းနှင့်လမ်းတစ်လျှောက်၌သင်တို့၏အကူအညီများအားလုံးသည်တန်ဖိုးအရှိဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ သင်၏ကားကိုကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုကားတင်သွင်းမှု ၀ န်ဆောင်မှုလိုအပ်သောကျွန်ုပ်အားအထူးအကြံပြုလိုပါသည်။
သင်၏အလုပ်အားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်းသည်အလွန်တန်ဖိုးထားခံရပြီးပြyouနာများစွာကိုသင်အမှန်တကယ်ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ ဒီတိုင်းပြည်မှာကားမောင်းခွင့်ရလို့အရမ်းဝမ်းသာတယ်။
အီတလီ - ဟွန်ဒါမော်တော်ဆိုင်ကယ်
"ဒါဟာအလွန်စိတ်ဖိစီးမှုအခမဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ခဲ့သည်ပေးထားသောစိတ်ကူးဝန်ဆောင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းရဲ့ကုမ္ပဏီအကြောင်းငါပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းငါနဲ့အတူတူပဲကျန်နေတဲ့သူငယ်ချင်းအချို့ကိုပြောပြီးသူတို့ကမင်းရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုသူတို့မှတ်ပုံတင်ပြားပြောင်းပေးလိမ့်မယ်။ ”
အမေရိကန် - KIA
“ ကျွန်မတို့ရဲ့ကားတင်သွင်းမှုကိုအရမ်းကောင်းပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Kia Sedona ကိုဗြိတိသျှလမ်းများပေါ်တွင်မောင်းနှင်ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းသည်အလျင်အမြန်ဖုံးအုပ်ထားခြင်း၊ ရှေ့မီးကိုချိန်ညှိခြင်းနှင့်ကောင်တာပေါ်တွင်ယူကေတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်တန်းစီခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်ခဲ့ကြသည်။ ငါတို့မှားလိုက်လေခြင်း၊ စစ်တိုက်ခြင်းမှာကားနှင့်အော်ပရေတာ ၀ န်ဆောင်မှုအေဂျင်စီ (VOSA) နှင့်စစ်ဖြစ်သည်။ ဒေသခံ Kia ကားရောင်း ၀ ယ်သူကရှေ့မီးစနစ် (ပေါင် ၄၀၀ ခန့်) ကိုအစားထိုးရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်းကြိုးတစ်ချောင်းမှာချည်ထားခြင်းခံရသည်။ သူကကျွန်တော်တို့ကိုမြောက်အမေရိကကားတွေပြုပြင်မွမ်းမံဖို့အသုံးပြုခဲ့တဲ့အမေရိကန်လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းနားကကားဂိုဒေါင်လေးတစ်ခုဆီကိုပို့လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် VOSA ရဲ့တင်းကျပ်မှုနဲ့အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတဲ့စည်းကမ်းတွေကြောင့်သူတို့လက်လျှော့လိုက်တယ်။ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏ကားတင်သွင်းမှုတွင်ဂျက်ကိုပြခဲ့သည်။ လီဗာပူးလ်ဆိပ်ကမ်းမှကားကိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းပြီးနောက်နှစ်လအကြာ၌ဂျက်သည်၎င်းအတွက်ယူကေ၊ မှတ်ပုံတင်၊ VOSA အတည်ပြုပြီးလိုင်စင်ချထားသည်။ Jack Charlesworth ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးခဲ့တဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ ”
THE Rev Michael SKLIROS
“ Jade Williamson နဲ့ My Car Import အဖွဲ့ကကျွန်တော့် Landrover တင်သွင်းမှုကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာနဲ့ထိရောက်စွာကိုင်တွယ်နိုင်ခဲ့တယ်။ တင်သွင်းမှု၏ရှည်လျားသောဖြစ်စဉ်ကိုလုံးဝမလွယ်ကူနိုင်ပုံပေါက်စေရန်သူတို့၏တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအကူအညီနှင့်အကူအညီအတွက်အလွန်အမင်းကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါဆန္ဒရှိတဲ့အကောင်းဆုံးတင်သွင်းသူနှင့်ငွေအတွက်အလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်။ ”
"ကျနော်တို့မကြာသေးမီကယူကေတွင်နေထိုင်ရန်ဘယ်လ်ဂျီယံကနေရောက်လာတယ်။ အင်္ဂလန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံကားကိုမှတ်ပုံတင်ချင်တယ်၊ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုစတင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်အခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံခဲ့ရပြီးကျွန်တော်တို့အရှုံးပေးလိုက်ရတယ်။ ထိုအခါငါတို့ကိုယ်စားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းလုပ်ဖို့ငါ့ကားတင်သွင်းငှားရမ်းရန်စိတ်ကူးရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ကားတင်သွင်းမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသီးသန့်ခွဲထားသည့်ကိုးကားချက်တစ်ခုလုပ်ပြီးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်သည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားသည်။ ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မေးခွန်းများကိုအီးမေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေဖော်ရွေပြီးလျင်မြန်စွာဖြေကြားခဲ့သည်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုလုံးကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးအောင်လုပ်ထားတယ်၊ ငါတို့မျှော်လင့်ထားတယ်၊ ငါ့ကားတင်သွင်းပြီးနှစ်လအကြာမှာမှတ်ပုံတင်စာရွက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့တယ် DVLA။ ကျွန်တော့်ကားတင်သွင်းမှုမှရရှိတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကိုယေဘုယျအားဖြင့်ကျေနပ်ပါတယ်။ ”
စပိန် - VW ဂေါက်သီး
“ ငါရေးချင်တာကမင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းကငါ့ကားတင်သွင်းမှုကိုထိရောက်စွာကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်၏ ၀ န်ထမ်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အလုံအလောက်ရှိပြီးဖော်ရွေပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိခဲ့သည်။ မင်းရဲ့အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါကမင်းကိုတခြားသူတွေကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးဖို့အကြံမပြုခဲ့ဘူး။ ”
စပိန် - Audi A8
နယူးဇီလန်မှ Duchess 'Audi ကိုနယူးဇီလန်မှ Woburn သို့သယ်ဆောင်လာသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းများ၊ အီးမေးလ်များနှင့်တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများစွာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ”
“ ဒီအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်ရယူပြီးကားနှစ်စီးတင်သွင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်မြင့်မားသော ၀ န်ဆောင်မှုအဆင့်အတန်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ထိရောက်မှု၊ ထိရောက်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုတို့သည်ယနေ့ခေတ်တွင်ကြုံတွေ့ရခဲသောစံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မော်တော်ယာဉ်များတင်သွင်းခြင်းသည်တကယ့်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်မျှော်လင့်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့် MCI ကပေးတဲ့အပြီးသတ် ၀ န်ဆောင်မှုကအလွန်သက်သာမှုရှိကြောင်းသက်သေပြခဲ့ပြီးအလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ MCI ကိုတခြားသူတွေကိုအကြံပေးဖို့မတွန့်ဆုတ်ပါ။ ”
ဒုတိယသမ္မတ Shell Global Trading
ဖင်လန် - Toyota
ဖင်လန်နိုင်ငံမှကျွန်ုပ်၏ Land Cruiser တင်သွင်းမှုတွင်သင်၏မမောနိုင်မပန်းနိုင်ကူညီမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါပြproblemsနာများဝင်ပေါက်မျှော်လင့်ထားပေမယ့်သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအားဖြင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေမယ့်ဖြစ်စဉ်ကိုတစ်ခုလုံးကိုထစ်သို့မဟုတ်ကြီးမားကျယ်ပြဥပဒေကြမ်းမပါဘဲသွား၏။ ငါနောက်ပိုင်းတွင်သင်မှတဆင့်ကားများဝယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခဲ့ကြပြီးအရာအားလုံးအရောင်းအပြီးနောက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နှင့်အတူအစွမ်းကုန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုံးစံ၌ဆက်ဆံခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ မင်းနဲ့အဖွဲ့ကိုအကြံဥာဏ်တွေပေးဖို့ငါစိတ်ရှုပ်ထွေးစရာမရှိဘူး၊ မင်းနဲ့အတူအနာဂတ်စီးပွားရေးကိုလည်းမျှော်လင့်နေတယ်။ ”
Los Angeles မြို့ - Porsche 356
“ ယနေ့မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီတွင်ကားကိုလုံခြုံစွာပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဂျွန်နှင့်မာရီယာတို့သည်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသည်! ငါနောက်ဆုံးခြောက်ပတ်ကြာချပ်ချပ်တစ်ချောင်းနှင့်ဝေဒနာခံစားရသဖြင့်အကူအညီများစွာမရခဲ့ပါ။ သူတို့ကအရာအားလုံးကိုခွဲထုတ်။ ဘီးလေးခုစလုံးတွင်တာယာများတပ်ဆင်ထားသဖြင့်သူတို့သည်သုံးခုလုံးကိုကြင်ကြင်နာနာရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသောဘီးအပိုတစ်ခုအတွက်စတုတ္ထနေရာကိုပြောင်းလိုက်သည်။ ပြီးတော့ကားကိုချပြီးငါ့အတွက်ကားဂိုဒေါင်ထဲထည့်လိုက်တယ်။ အားလုံးအလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေ။ အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အေဒီ - အန်ဒိုရာAE - အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုAL - AlbaniaAR - အာဂျင်တီးနားAT - AustriaAU - AustraliaစတြေးလျBE - ဘယ်လ်ဂျီယံBG - ဘူဂေးရီးယားBH - ဘာရိန်းBN - BruneiBR - ဘရာဇီးBY - ဘီလာရုစ်CA - ကနေဒါCH - ဆွစ်ဇာလန်CL - ချီလီCY - ဆိုက်ပရပ်စ်CZ - ချက်သမ္မတနိုင်ငံDE - ဂျာမနီDK - ဒိန်းမတ်EE - အက်စ်တိုးနီးယားES - စပိန်FI - ဖင်လန်FK - ဖော့ကလန်ကျွန်းစု (Islas Malvinas)FR - ပြင်သစ်FX - ပြင်သစ်၊ မြို့တော်GB - ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းGG - GuernseyGI - ဂျီဘရောလ်GR - ဂရိဟောင်ကောင် - ဟောင်ကောင်HR - ခရိုအေးရှားဟူး - ဟန်ဂေရီID - အင်ဒိုနီးရှားIE - အိုင်ယာလန်IM - Isle of Manအိုင်တီ - အီတလီje - ဂျာစီJP - ဂျပန်KR - တောင်ကိုရီးယားKW - ကူဝိတ်KY - ကေမန်ကျွန်းစုLI - LiechtensteinLT - လစ်သူရေးနီးယားLU - လူဇင်ဘတ်LV - လတ်ဗီးယားMC - မိုနာကိုMK - မက်ဆီဒိုးနီးယားMO - မကာအိုMT - မော်လတာနိုင်ငံMX - မက္ကဆီကိုMY - မလေးရှားNL - နယ်သာလန်မဟုတ်ဘူး - နော်ဝေးNZ - နယူးဇီလန်အို - အိုမန်PH - ဖိလစ်ပိုင်PL - ပိုလန်PT - ပေါ်တူဂီQA - ကာတာRO - ရိုမေးနီးယားRS - ဆားဘီးယားRU - ရုရှားSA - ဆော်ဒီအာရေဗျSE - ဆွီဒင်SG - စင်ကာပူSI - ဆလိုဗေးနီးယားSK - လိုဗက်ကီးယားTH - ထိုင်းTR - တူရကီTW - ထိုင်ဝမ်အမေရိကန် - အမေရိကန်VG - ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုVI - ဗာဂျင်းကျွန်းစုVN - ဗီယက်နမ်ZA - တောင်အာဖရိကZW - ဇင်ဘာဘွေ
သင်သည်အီးယူပြင်ပတွင် ၁၂ လကျော်နေထိုင်နေစဉ် ၆ လကျော်အတွင်းသင်ကားကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါသလား။